China 304 304L eshushu liqengqiwe ipleyiti steel stainless Ukwenziwa kunye mveliso | IHuaxiao
Ukuqengqeleka okushushu ngoku kunciphile njenge-0.78mm. Umphezulu weplati eshushu-shushu ineziphene ezifana nesikali se-oxide yesinyithi kunye nomngxunya. Iphepha elitshisiweyo elishushu linobulukhuni obuphantsi, ukuqhubekeka ngokulula kunye nokuhamba kakuhle. Amashiti esinyithi ashushu ashushu, iipropathi zoomatshini ziphantsi kakhulu kunokusetyenzwa okubandayo, kwaye okwesibini ukwenziwa kwenkqubo, kodwa banobungqongqo obungcono kunye nokuqina.
Sino Stainless Capacity malunga 304 / 304L Kushushu liqengqiwe intsimbi engenasici ipleyiti, 304 HRC, 304L PMP
Ububanzi: I-600mm-3200mm, iimveliso ezixineneyo ze-pls zijonge kwimicu okanye kwimveliso yebar ethe tyaba
304L inqanaba elifanayo kumgangatho welizwe ohlukileyo
Icandelo le-304L yeChemical ASTM A240:
C: .0.03, Si: ≤0.75 Mnu: .02.0, Cr:18.0～20.0, Ni: 8.0～12.0, S: .00.03, P: .0.045 N0.0
Ipropathi ye-304L ye-ASTM A240:
Tensile amandla (MPA):> 485
Amandla oMveliso (Mpa): 170
304 Ibanga elinye ukusuka kumgangatho welizwe ohlukileyo
Icandelo le-304 yeChemical ASTM A240:
C：-0.08 ，Hayi ：≤0.75 Mnu ：.02.0 ，Kr ：18.0～20.0 ，Ni ：8.0～10.5，　S ：-0.03 ，P ：.0.045 N0.0
Ipropathi ye-304 ye-ASTM A240:
304L intsimbi engenanto
I-304L insimbi engenasici, ekwabizwa ngokuba yi-ultra-low carbon steel stainless, yinto engenasici engenasici esetyenziselwa ukwenza izixhobo kunye neendawo ezifuna iipropati ezifanelekileyo (ukubola kunye nokuqina).
Ezahlukileyo ngokwahlukileyo malunga ne-304 kunye ne-304L Inkcazo eshushu eshushu kunye nengqele eqengqelekileyo
1.Umphezulu wetshe elibandayo linendawo ethile yokuhomba. Igudile xa uyibamba kwaye iyafana nekomityi yentsimbi eqhelekileyo esetyenziselwa ukusela amanzi.
2.Ukuba iphepha elitshisiweyo alifakwanga, liyafana nomphezulu weeshiti ezininzi eziqhelekileyo kwimarike. Umphezulu onomhlwa ubomvu, kwaye umphezulu ngaphandle komhlwa umfusa-mnyama (isikali se-iron oxide).
3.Izibonelelo zomsebenzi wamashiti aqengqelekileyo kunye ashushu asongwe ngala:
(1) Ukuchaneka kuphezulu, kwaye umahluko kubukhulu bentsimbi eqengqelekayo ebandayo ayidluli kwi-0.01 ~ 0.03mm.
(2)Ubungakanani bunciphile, isitya esibandayo esinoqengqelekayo sinokuqengqeleka ngensimbi yentsimbi eyi-0.001 mm; ukuqengqeleka okushushu ngoku kucekeceke njenge-0.78 mm.
(3)Umgangatho womgangatho uphakamileyo, kwaye ipleyiti yentsimbi ebandayo inokuvelisa umphezulu; Ngelixa umphezulu weplati eshushu ishushu ineziphene ezifana nesikali se-iron oxide kunye ne-pitting.
(4) Amaphepha aqengqelekayo abandayo anokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zomsebenzisi ezinje ngamandla eqine kunye neepropathi zenkqubo ezinjengezitampu zempahla.
Ukuziqengqa ebandayo ukuziqengqa eshushu ziiteknoloji ezimbini ehlelayo ezahlukeneyo. Njengoko igama libonisa, ukuqengqeleka okubandayo kwenziwa kwimeko yentsimbi kubushushu obuqhelekileyo. Ubulukhuni beli sinyithi bukhulu. Ukuqengqeleka okushushu yintsimbi yenziwe kumaqondo obushushu aphezulu, eneenkcukacha:
Iphepha elitshisiweyo elishushu linobulukhuni obuphantsi, ukuqhubekeka ngokulula kunye nokuhamba kakuhle.
Iphepha elibandayo eliqengqelekayo linobulukhuni obuphezulu kwaye kunzima ukulenza, kodwa akukho lula ukukhubazeka kwaye linamandla aphezulu.
Iphepha elishushu elisongiweyo linamandla asezantsi kakhulu, umgangatho wobuso uphantse wahlupheka (une-oxidation ephantsi kunye nokuguda), kodwa i-plasticity ilungile, ipleyiti ngokubanzi iphakathi kwaye ityebile. Iphepha elibandayo elibandayo: amandla aphezulu, ukuqina okuphezulu, ukugqiba komphezulu ophezulu, iphepha elibhityileyo ngokubanzi, linokusetyenziselwa ukunyathela ibhodi.
Amashiti esinyithi ashushu ashushu, iipropathi zoomatshini ziphantsi kakhulu kunokusetyenzwa okubandayo, kwaye okwesibini ukwenziwa kwenkqubo, kodwa banobungqongqo obungcono kunye nokuqina.
Ingqele eqengqelekileyo yentsimbi ineqondo elithile lomsebenzi wobulukhuni, ubunzima obuphantsi, kodwa inokufezekisa umlinganiselo olungileyo wesivuno, esetyenziselwa amaqhekeza entwasahlobo agobileyo kunye nezinye iindawo, kwaye ngenxa yokuba isivuno sisondele kumandla aqine, akukho ingozi ngexesha lokusetyenziswa. Ukuxelwa kwangaphambili, ingozi inokwenzeka xa umthwalo ungaphezulu komthwalo ovumelekileyo.
Egqithileyo Ipleyiti yentsimbi engenasici engama-201 eshushu
Okulandelayo: Ipleyiti yesinyithi eshushu engenanto i-309
Kwizinga eliphezulu Wuxi lokusila kumazwe SUS 304 stainless ...